Falcelin ka dhalatay weerar loo arkay inuu Fahad Yaasiin ku qaaday beesha Habargidir - Caasimada Online
Home Warar Falcelin ka dhalatay weerar loo arkay inuu Fahad Yaasiin ku qaaday beesha...
Falcelin ka dhalatay weerar loo arkay inuu Fahad Yaasiin ku qaaday beesha Habargidir
Muqdisho (Caasimada Online) – Fahad Yaasiin ayaa shalay markii ugu horeysay ka hadlay kiiska Ikraan Tahliil oo nolol iyo geeri aan lagu arag in ka badan 11 bilood, wuxuuna si yaab leh uga gilgishay eedeymaha dul hoganaya ee shirqoolka gabadhaas oo ka tirsaneyd hey’adii uu hoggaaminayey ee NISA.
Fahad oo iska leexinaya kiiska Ikraan ayaa weerar toos ah ku qaaday siyaasiyiin ka soo jeeda beesha Habargidir, kuwaas oo laf-dhabar u ahaa in kursigii xildhibaanimo la dhaafiyo Fahad Yaasiin.
Fahad ayaa sheegay inay Ikraan shirqooleen Ra’iisul Wasaare Rooble, Taliyaha NISA loo magacaabay Mahad Salaad iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala, sidoo kalena uu dilay Mahad Karataay oo ah horjooge ka tirsan Al-Shabaab, kana soo jeeda beesha Cayr ee Habargidir.
Dad badan oo ka fal-celiyey hadalka Fahad waxay muujiyeen in ninkaan uu eedeymo u soo abaabulay siyaasiyiin ka soo jeeda hal beel, kuwaas oo ah raggii dhaafiyey kursiga.
Mahad Salaad ayuu si gaar ah ugu xagliyey inuu xiriir la leeyahay Mahad Karataay oo ay kasoo wada jeedaan beesha Ayaanle Cayr, halka Rooble iyo Al-Cadaala ay ka soo kala jeedaan Sacad iyo Saleebaan.
Fal-celinta dadka waxaa aad ugu soo noq-noqotay in Fahad uu ku dadaalay in eedeynta kiiskaan ee Habargidir ku wajahan uu ku soo daro beesha Duduble oo ah lafta ugu weyn beeshaas, isagoo sheegay in xaafadda Daarusalaam ay gabadha ugu geeyeen Al-Shabaab.
Waxaan soo uruurinay qaar ka mid ah fal-celintii dadweynaha:
Abwaan Guure ee soo qaatay qoraal horay uga soo baxay NISA ayaa yiri, “Fahad Yaasiin Laba sano ka hor waxuu iidheh u sameynayay Mahad Karataay, Marka ma dirireen? Mise ciilka reer hebel ayuu kula dhacay?”
Xasan Nuur ayaa yiri, “Hal sabab oo yar oo lagu qanci karo sooma bandhigin Fahad, hadiiba ay jirto amni iyo dal la qalqal gelinayo sabab loo dooran karay gabar yar oo shaqo la’aan ah ayaa meesha oolin ama caqligu uusan sheegi karin. Wareeysiga Fahad waxa uu si kooban u soo bandhigay in aamusnaanta Fahad iyo isqarinta keliya ay daarneeyd caqli iyo xikmad xumo uu asagu isku ogaa.”
Abwaan Shariif Heersare ayaa yiri, “FAHAD YAASIIN Waxaa uu muujiyey in uu yahay ciil qabe u jirran qabiil Soomaaliyeed, waana sababta uu isugu keenay afar nin oo isku beel ah, dhanka fekerkana aad u kala fog. Waxaa cad in ay yihiin raggaasi kuwa dalka ka qabtay khatartiisa, marka laga reebo hal nin, waana madax geeda la dhac waraysiga ay bixinayaan isaga iyo gacan yarihiisa Yaasiin Fareey. Waxaadna ka dareemi kartaa qaabka ay uga hadleen Kiiska Ikraah Tahliil AHU.”
Abwaan Cusmaan Guure ayaa mar kale yiri, “Qaali Guhaad ha qanacdee qof nool u keen ama qiraal.”
Farhaan Cali Xalane ayaa isna yiri “Odeyga naceeybka Habargidir aa ka buuxsamay, macaa adeerkood Duduble meelow sheekada kasoo galiyo ayuu waayey markaasow Daarusalaam la aaday. Xaafad dadka ladan deganyihiin ku lahaa. Abuu Camaarow dhuumashadaan dhabarku muuqdo kuu socon meeyso.”